Flipboard အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.0 | 500,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（14.3MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle
သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအားလုံးအတွက်အရည်အသွေးအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေပါ။ အစားအစာ, အစားအစာ, ဓာတ်ပုံ, ဖျော်ဖြေရေး, နည်းပညာ, နည်းပညာ, လူနေမှုဒီမိုကရေစီ, သင့်အားအချိန်ကိုကယ်တင်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်ခေါင်းစီးများ, ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဇာတ်လမ်းများကိုသင့်အားအချိန်ကိုကယ်တင်ရန်, သင့်အားလှုံ့ဆော်ပေးပြီးမှုတ်သွင်းခံပြီးသင်အမြဲဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကိုအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ချိန်းတွေ့ပါစေ။
ထုတ်ဝေသူများ, တီဗွီဘူတာများနှင့်လွတ်လပ်သောထုတ်လုပ်သူများအခမဲ့ဖြစ်သည်။ Curated VideoSpyan, Celegrity, Celectrity, Spology, Sports, Spresters နှင့် Smart Projectors နှင့်စမတ်အယ်ဒီတာများနှင့်စမတ် algorithms တို့၏ထူးခြားသည့်ပေါင်းစပ်မှုများကိုစစ်ဆေးပါ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကျောက်မျက်ရတနာ။ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများအပေါ်အပြည့်အဝရှုထောင့်ကိုရယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အယ်ဒီတာများသည်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ကုသပေးသည့်ရင်းမြစ်များရောနှောနေပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်သူတို့သိထားသည့်အချက်များပင်အကြံပြုထားသည့်ဇာတ်လမ်းများကိုပင်သင်နှင့်အများအားဖြင့်ထိုင်။ အရေးအကြီးဆုံးအရာကိုလှန်လှောကြည့်နိုင်သည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းများကိုပင်သင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ သင်၏အကျိုးစီးပွားကိုရွေးချယ်ပြီးခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ။ သင်ကမ္ဘာ့သတင်းများ, ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်နည်းပညာတိုးတက်မှုများကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါသလား။ အမျိုးသားသတင်းစာများမှဆောင်းပါးများကိုဖတ်လိုခြင်း, အားကစား Podcasts များရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများကို skim? trending ဘဝပုံစံပုံပြင်များမှ Zeitgeist ကိုသိမ်းယူရန်ရှာဖွေနေပါသလား။ flipboard သင်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
Plus အားသင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်မဂ္ဂဇင်းများကိုဖန်တီးနိုင်သည် - သင်ဖတ်လိုသည့်ဆောင်းပါးများကိုရှာပါသို့မဟုတ်သင်မျှဝေလိုသည်, သင်၏မဂ္ဂဇင်းများသို့လှန်လှောကြည့်လိုသည်။
* New York Times, National Geographic, Vanity Fairs နှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောထိပ်တန်းသတင်းများ
ကိုရှာဖွေပါ သတင်းစာများနှင့်မဂ္ဂဇင်းများ, ဒေသများ, ဒေသခံ, အမျိုးသား, အမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသင်၏ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းစဉ်များဖန်တီးခြင်း
- သင်ချစ်သောအင်္ဂါရပ်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လက်လှမ်းမီရန်အတွက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာ9ခုကိုအတူတကွစုစည်းပါ။
• Daily Edition
- Flipboard ရှိထိပ်တန်းကြေညာသူများ -
- News & Poldics Discovery: News & Politics Discovery ား York Times, CNN, Politico, Axios
- Tech & Science - Tech & Science - Tech & Science တို့ - Tech & Science ကိုဖတ်ပါ, Wired နှင့်သိပ္ပံနည်းကျပုံပြင်များ - နံရံပေါ်မှသင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သည် Street Joung ဂျာနယ်, Forbes - Forbes
အားကစား - အမျိုးသား Pastime သို့မဟုတ် World News, CBS SPORKS နှင့်အတူအဓိကအားကစားပွဲများ,
- လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်ကျန်းမာခြင်း - Brat Co. Self, Women, Women's Heartment နှင့်အတူထွန်းသစ်စစတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ။ Bon Appetit, စားနပ်ရိက္ခာဖောင်းပွမှု, သင်၏လှည့်လည်ခြင်း, Lonely Planet နှင့်အတူ National Geographic, Lonely Planet တို့ဖြင့်သင်၏လှည့်စားခြင်း - အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း - သင်၏စံပြအိမ်နှင့်ဥယျာဉ်ခြံဝင်း, အိမ်လှေကားထစ်များ - စတိုင် - စတိုင် - avant-garde သို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ် ... sartorial လှုံ့ဆော်မှု Vogue, refinery29, W မဂ္ဂဇင်း GQ
https://www.linked.com/flpany/flipboard- ဆား -
Flipboard ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုဗွီဒီယိုများအတွက် https://about.flipboard.com/tutorials/tutials သို့ဝင်ရောက်ပါ။
flipboard app ကို အသုံးပြု. အကူအညီလိုပါသလား။ Settings ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့် Settings ဖွင့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီဆောင်းပါးများကိုရှာဖွေပါ။ flip.it/help ရှိဆက်သွယ်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
ဘာအသစ်လဲ Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle 4.2.85
APP Review - Flipboard: Get Personalized News On The Go | Must Have APPs | फोन के लिए महत्वपूर्ण APP